Sidaas, waxaad haysataa in 4K TV, hadda waa maxay? Waxaa kaliya ee sida wanaagsan sida video ah in uu soo bandhigay, si aan sugayno adduunka soo qabano 4K content, waxa soo baxay waxaa hadda si aad u dhandhansiino waxa uu mustaqbalku u sido content xal HD Ultra.
1. Ocean Duuban muunad quuska
Tani waxay la mid horeysay ee aan doorashada 4K video muunad waa labo ka mid ah sababaha, marka hore waan jeclahay arrimaha ay ugu yeeranayaan ugu, iyo marka labaad ka eegaya dhinaca farsamada waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu fiican halkaas.
Laga duubay a camera Red Mid ka mid ah, waxa ay ku tusaysaa ee nashaadka iyo si faahfaahsan in aan la wadaajisaan 4K xal ay ugu fiican, si qoto dheer midabka oo ka mid ah kalluunka iyo shacaab waa lama ilaawaan ah, iyo markii dhaqaaqdo shot in lagu gudbo ee nibiri dareenka baaxadda xallinta siinayaa run ahaantii waxa ay muujinaysaa waxa 4K waa awood, iyo sababta ay ilaa tallaabo ka wax a aan horay u aragnay.
2. Trailer filimka 'Elysium' ah
Aad u yar footage-soo-saarka movie waa fudud loo heli karo waxaa ku 4K, laakiin tani waa mid ka mid ah laga reebo ka. Trailer buuxda masrixiyada u movie ee quruxda leh Ultra HD, muxuu uga dhigi liiska? Waa hagaag Waxaan qabaa haddii aad doonaya in ay arkaan faa'iidooyinka 4K, ka dibna sambal sida mid Ocean Duuban sare ku xusan run ahaantii tusayo awoodiisa farsamo, laakiin waa filimada dhabta ah in inta badan dadka la raba in ay isticmaalaan 4K Maaliyadeeda, oo waxaa ku qoran aad tilmaan aad u wanaagsan oo ah inta la kordhiyo la caddeeyo, si faahfaahsan iyo nashaadka laga faa'iidi karo wareegaya 4K. Version ayaa HD caadiga ah ee trailer tani ay tahay mid aad u sahlan loo heli karo, sidaas darteed tani waa wax aad laga yaabaa barbardhigo toos ah. Dabeecadda filimka, filim action sci-fi, sidoo kale laftiisa naxaa 4K badan goobaha CGI si qurux badan buriyay in trailer si loo eego.
Tani waa trailer ee mashruuc xiiso leh, laga duubay oo gebi ahaanba ku 4K iyo shaqada oo nin keliya, waxaa la tabiyay in ay 4K filimka horreeyey waxaa la sameeyey heli karaa for sale. Filimka laftiisa, iyo trailer this, waa fikrad fudud, gaabis-dhaqaaq iyo waqtiga shineemada darajo ee South West of America, u qaatay sida agaasimaha, Tom Lowe, safri agagaarka gaari uu qaadayo. Fikradda qudhiisu saamayn xiiso leh, laakiin muunad halkan waxaa ugu wacan ee ka kooban. Daawashada ka expanses weyn ee dabeecadda socodka by in 4K waxaa si fudud u xusuusan waxay afuufayeen, halkan run ahaantii aad u arko saameynta ku dhowaad 3D xal u badan oo faahfaahsan keeno dhexdhexaad ah, waxa ay la mid ma aha daawashada video ah, runtii waa sida raadinayaa of a furmo suuqa ee nolosha dhabta ah.
4. sameynayo Sawirro Doon
Waxa jira dhowr videos baaritaan ku saabsan arrintan, oo dhan oo iyaga ka mid shaqo fiican qaban of bandhigeen 4K lakiin aniga ahaan waa mid ka mid ah in ay diiradda marayay doomo loogana hortegi ah qaalina ah in uu yahay mid ka mid ah si loo eego tan. Mar kale waxa ay muujinaysaa saamaynta xal 4K markii bandhigeen adduun weynaha nagu wareegsan, markan Vista dekad sida doonni fuulay ag maraaba wuu marayo, si faahfaahsan loo arki karaa in biyaha, oo rakaab ah oo ku saabsan doon oo la tixraacayo, iyo dareenka xaqiiqo iyo qiyaasta, oo igu culus yihiin waxyaalaha dhigay 4K marka laga reebo, waa iska cad halkan.
5. ilmo ee Steel trailer
Waxa kale oo dhif 4K movie trailer, tani mid mar kale muujinaysaa badan oo CGI tayo aad u sarreeya in ay si dhab ah u muujiyaan off awoodaha ee 4K ugu fiican. Qaar ka mid ah isticmaalka weyn oo qoto dheer oo duurka in 4K ku nuuxnuuxsaday, in badan oo ka mid shuut ah iyo guud ahaan waxay bixisaa aragti weyn galay 4K iyo waxa aad filan karto waxaa ka. Video xiiso leh An in sidoo kale waxay maamushaa si ay u sheegaan wax yar sheeko iyo sidoo kale isagoo aan u noqono.
Sintel waxaa ah gaaban dhaceen abuuray barnaamijka animation days ah, halkan in 4K waxay ka dhigan tahay eegno fantastic waxa 4K siin karaan dhammaan noocyada warbaahinta, goobta waa la furay, baraf daheysha dabaysha, tusaale ahaan, awood kuu siinayaa in aad aragto cajiib ah si faahfaahsan in kaliya aan la arki karo gudaha version HD caadiga ah. Maxaa yeelay, dukhsiga shaqsi sida baaritaan qof iyada oo burburka magaalada ah waa meel kale oo sare marka la eego awoodiisa farsamo.
Muuqaal kale oo ka mid ah Sintel waa inay eegtaa waxay diiradda jilicsan oo accentuates xal sare, oo ka dhigaysa this video taagan oo ka soo baxay dadka kale ee liiska. Markaasaa masduulaagii wuxuu yar oo si fiican u dhaceen iyo jilayaasha ugu waaweyn qoreysa, gaar ahaan timaha, waxaa lagu cajiib ah si fiican u ogaaday. Hab weyn inay soo bandhigto aad qalabka 4K.
Sample 7. Stock Duuban
Tani waxay la mid yahay isku qasan oo ka mid ah clips gaaban ka footage stock ganacsi oo loo isticmaalo muunad ah ee alaabta. Taasi ma u samaysaa wax ka yar ee fantastik ah 4K clip Si kastaba ha ahaatee, la footage si gaar ah u doortay si ay u muujiyaan off faa'iidooyinka 4K ay aad u wanaagsan in aan (waa xirmo dhiirrigelin ka dib oo dhan) waxaa jira halkan wax qof kasta. Laga soo bilaabo midabada ammaanta qorrax ka ah in ay qaraxyo iyo darajo sare markii la yaab leh, oo leh, mar kale, midabada fantastik ah oo firfircoon, noqono dhab ah 4K in dareenka dhabta ah ee erayga.
8. Bees Honey
Back to nooca for this mid ka mid ah, iyo eponymous Honey Bee. Muujisid ma aha oo kaliya waxaana suura gal midabka iyo si faahfaahsan ee ku hareeraysan ah, waxa kale oo qabsatay isu Bees ee aan caadi aheyn inay aaminnimo, si faahfaahsan garabka gaar ahaan meel u dhow-ups ah waa habka kaliya wax ka shisheeyaa waxaan arkay dhaqaaqa images hor, definta xal sare? Dhab ahaantii, laakiin ma video. Xayaysiin kale oo weyn oo 4K footage iyo sidoo filim la jecel yahay.
Ma dhihi karo waan hubaa badan oo taageere u ah filimada, laakiin si ay u arkaan waxa si dhakhso ah u eg in 4K tani waa mid ka weyn. Si ka duwan ee isjiidka kale filim, taas oo ka mid ah ma ka buuxa CGI, sidaa daraadeed waxa uu muujinayaa arrin ka duwan 4K filimada halkan, ee stunts nolosha dhabta ah ay sameeyeen aqoonyahannada fal dhoola-dhaqameedyada waxaa weeye waxa ay ka mid yahay oo dhan ku saabsan. Oo ma naga dejisay, shilalka, qaraxyo iyo waxmatarayaal raacaa gaariga, wax walba oo Bond ku saabsan tahay. Marka laga reebo in 4K. Great.
Tani waxay la mid tahay oo keliya badan oo xiiso leh. Rashka, in 4K. Waxaana suura gal Color, si faahfaahsan, waxa ay u dhan ayaa. Waxaa ka furmay gol Wayn ee magaalada muujinaya nalalka ee fiidkii iyo wixii ka dambeeya, ka dibna galay bandhigay buleer cajiib ah, runtii waa wax cajiib ah oo fiirin weyn ee 4K footage.
Taasi waa 10 our sare, oo dhan ugu fiican ee aan farsamo ahaan, laakiin kasta wuxu bixiyaa wax yar ka duwan in dhadhansiinno waxa 4K waa dhan oo ku saabsan, oo dhab ahaan waxa aad 4K screen awoodaa.
> Resource > Video > Top 10 shaybaar 4K Video